Cabanga Ngaphakathi Kwebhokisi nge-Entrata Marketing Suite | Martech Zone
Abantu baseMelika baya ngokuya bakhetha izindlu eziqashisayo njengoba inani lemibhangqwana eshadile enezingane lincipha kakhulu futhi amaMillenials akhetha ukuba ngabaqashi bezizathu zokuhamba, ukunethezeka nezizathu zezezimali.
Ngokuphakama kwezinkulungwane zeminyaka kugcwalisa imakethe yokuqasha, akumangazi ukuthi izifundo zakamuva zikutholile lokho Amaphesenti angama-74 alabo abafuna ukuqasha amafulethi bathatha i-intanethi basebenzisa amadivayisi wabo weselula ukusesha kwabo izindlu. Ukuthumela kumasayithi wokufakwa kuhlu kwe-intanethi, ukwenziwa kwewebhusayithi ephathekayo, imithombo yezokuxhumana, nokuphathwa kwedumela kungaphezulu kwengqondo kubaphathi bezindlu. Kodwa-ke, indawo eguquguqukayo yamanani amafulethi, ukuthutheleka kwezikhala zabahlali ezinkundleni zokuxhumana kanye nezindawo zokubuyekeza, kanye nezinqwaba zamasayithi okufakwa kuhlu lwe-inthanethi zikwenze kwaba ngumsebenzi ongenakwenzeka ngabaphathi ukuqhubeka.
I-Entrata's Marketing Suite
I-Entrata's Marketing Suite yisixazululo esibanzi, sokumaketha esisuselwa emafini esisiza imboni yamafulethi ukuthi ilawule amanani entengo, idumela, nokuthunyelwa kwayo konke ngenkathi ishayela ithrafikhi ethe xaxa kumawebhusayithi ayo.
Ukucabanga Ngaphakathi Kwebhokisi
Abaphathi bempahla bangathola zonke izici nezinsizakalo abazidingayo ukumaketha impahla yabo ngaphakathi kwesikhulumi se-Entrata. Azisekho isidingo sokudala noma cabanga ngaphandle kwebhokisi ngezidingo zabo zokumaketha ngoba ipulatifomu yethu ibenzela konke. Nayi iminikelo:
Ithemba Portal ⓡ - Amawebhusayithi enza ukuphakamisa okunzima
I-ProspectPortalⓡ yisisombululo sewebhusayithi esiphendula ngokuphelele esivumela umphakathi wamafulethi ukuthi ubonise uhlu olutholakalayo lokuqasha ngesikhathi sangempela kuwebhusayithi yabo. I-CMS ivumela indawo ukuthi ishintshe izithombe, ifake amagama angukhiye e-SEO, ifake okuqukethwe okusha bese ishintshela kudizayini entsha yewebhu ngokuchofoza nje okumbalwa kudeshibhodi ye-Entrata. Ngaphezu kwalokho, amasayithi ethu afaka amathuluzi wokukhiqiza aholayo (ukuhlanganiswa kwamakhadi ezivakashi, izilinganiso nokubuyekezwa, izinketho zokuqashisa online, nengxoxo ebukhoma) ukusiza ukuguqula ithrafikhi yewebhusayithi ibe imikhondo yangempela.
Singalinganisa impumelelo yanoma yiluphi uhlobo lomkhankaso wokumaketha esiwuqhubayo, noma ngabe ukusebenzisa kahle izinjini zokusesha, ukukhokha ngokuchofoza ngakunye noma umkhankaso wekhadi leposi. Kusuka kuthrafikhi yewebhu, inani lamakhadi ezivakashi namanani wokuguqulwa, ipulatifomu isitshela konke esidinga ukukwazi. IMeghan Hill, i-Guardian Real Estate, izakhiwo eziyi-150 kusetshenziswa iProspect Portal
I-ILS Portal™ - Isikhathi Saving, Ukunciphisa Ukungena Kwedatha
Ingcezu ye-ILS Portal yedeshibhodi ye-Entrata ilawula konke ukumaketha kwempahla okuku-inthanethi ngokufunzwa okuzenzakalelayo kuzo zonke izinsizakalo ezinkulu zokufakwa kuhlu kwe-inthanethi. Isusa ngokushesha amayunithi aqashisiwe futhi ivuselele wonke amasayithi nganoma yiziphi izinguquko ezenziwe entengweni nakwezinye izimo zeyunithi.
Siphumelele kakhulu ekutholeni konke okuthunyelwe kwethu ku-Craigslist nokuhlala phezulu kwimiphumela yosesho. Ukuthumela ngqo ku-Craigslist ngaphandle kwaleli thuluzi bekusinda futhi kudla isikhathi, ngakho-ke bekunzima kubaphathi bempahla yethu ukuthumela kaningi njengoba besicela. Manje, sithola ithrafikhi eyandayo kuzo zonke izakhiwo ezivela kwaCraigslist ngenxa yayo. U-Amber Ammons, uMqondisi Wezokumaketha Nokuqeqesha, i-Fore Property Company
Intengo ye-Entrata™ - Intengo Yesokudla, Iyunithi Elungile, Isikhathi Esifanele
Ucezu lwentengo ye-Entrata kudeshibhodi ye-Entrata luqapha yonke impilo yokuphila kwerenti kanye nomhlaba wokuncintisana ukubikezela ukuhlolwa okunembe kakhulu kokubekezelelwa kwamanani omphakathi wamafulethi. Abaphathi bezindlu bangabuka idatha yamanani kusixhumi esibonakalayo esinamagrafu namashadi afundeka kalula wokuqonda okulula kokuthi kungani amanani ahamba nokuthi ahamba kanjani.
IdumelaAdvisor™ - Ukunquma ukuthi izakhamuzi zifunani
I-ReputationAdvisor iqoqa ukubuyekezwa kwezakhiwo kusuka kuwebhu yonkana kusixhumi esisodwa kudeshibhodi ye-Entrata efaka nemithombo yezokuxhumana ephelele futhi ibukeze uhlelo lokuphathwa kokuqukethwe. Uhlelo lokubika lusiza ukukala ukusebenza kwempahla ngokuhamba kwesikhathi, kugqamisa amandla nobuthakathaka bezakhiwo.
Abakwa-Entrata muva nje baqoqe imininingwane ngemibono kanye nokulinganiswa kokubuyekezwa kanye nemithombo yezokuxhumana yezakhamuzi ezingaphezu kuka-2,000 XNUMX.
Chofoza lapha ukuze ufunde isifundo esigcwele
Izinsizakalo ze-SEO - Ukubonakala okwandayo, Ukwandisa iTraffic
Sinikeza amaklayenti ethu ngazo zombili amasu we-SEO asekhasini nasekhasini ukwandisa ukubonakala nethrafikhi kuwebhusayithi yabo. Ngaphezu kwalokho, ithimba lethu lihlinzeka ngamasu ahlukahlukene wokulawulwa kwedumela online afaka yonke into kusuka ekudaleni okuqukethwe koqobo ukuxhumanisa ikhasi lezakhiwo namasayithi emidiya ahloniphekile.
Umphathi Omkhulu - Akukho Lead Left Behind
ILeadManager ihlanganisa wonke umthamo wekhadi lezivakashi lendawo kudeshibhodi ye-Entrata. Ihlanganisa futhi ihlele yonke imithombo eholayo yezakhiwo noma ngabe ama-walk-ins, izingcingo, noma imibuzo eku-inthanethi ukuhlinzekela ukulandelwa okulula nokulandelwa kwezincwadi ezinemikhondo. Ngawo wonke umgwaqo oholayo nokubikwa okufakwe endaweni eyodwa, izakhiwo ziyakwazi ukuxhumana nemikhombandlela eminingi, qhathanisa imiphumela, futhi zenze izinqumo ezihlakaniphile lapho uzosebenzisa khona amadola wokumaketha.
Tags: abaqashi bezindluukungenaindawo yokuthengisa yokungenaelsportalumphathi wabaphathiukuphathwa kwempahlaukuphathwa kwempahla ukumakethaingosi yokulindelaokulindelweukuthengisa izindluukumaketha kwabaqashiamasu werento seoabaqashayoumeluleki wegama
Izinyathelo ezi-3 zokuqala umkhankaso wokumaketha ngevidiyo webhizinisi